Inona no atao hoe fenugreek? Jereo ny fananany, ny masomboly ary maro hafa! | Nutri Diet
PaÃ¼ Heidemeyer | | soso-kevitra, Vatsim-pivelomana, sakafo
Nisy olona akaiky anao angamba nanonona ilay hoe fenugreek ary nilaza taminao ny fananana sy tombontsoa tsara mandray anjara ity zavamaniry ity.
Tsy ho an'ny kely kokoa, legume io miaraka amin'ny otrikaina betsaka sy fananana ara-pahasalamana izay manome fanampiana bebe kokoa amin'ny vatanao.
Izy io dia ahitra fitsaboana izay teraka natoraly tany MediteraneManana fampiasana marobe izy, anisan'izany ny mampiavaka azy: ny fihenan'ny lanja, ny fisorohana ny volo, ny fifehezana diabeta, sns.
Ny raviny sy ny voany dia mitovy ampiasaina na amin'ny fampiasana anatiny na ivelany. Ny fampiasana azy amin'ny fandrahoan-tsakafo dia mitranga any amin'ny faritra maro any Mediteraneana, zava-manitra manitra manome tsiro mangidy mangatsiaka ho an'ny lovia. Izy io dia azo aroso ho toy ny tsimoka, lafarinina na iray manontolo, miankina amin'ny fomba fahandro izay tanterahina.
Fantatra amin'ny anarana hoe Alhova koa izy io, mahazo ny fitsaboana legioma ary mihombo hatrany ny fampiasana azy. Raha mahavita mampiditra fenugreek ao anaty sakafo ianao, dia homena vitamina A, proteinina, phosforus, vy, tavy mahasalama ary gliosida betsaka kokoa ho azy.
1 Fenugreek fananana
2 Voa Fenugreek
3 Aiza no hividianana fenugreek
5 Manatavy anao ve ny fenugreek?
6 Fenugreek hampitomboana ny tratra
Ity zavamaniry ity dia manana fananana izay afaka manampy antsika amin'ny fitsaboana aretina isan-karazany. Izy io dia ampiasaina ho toy ny stimulant antiparasite, laxative, anti-inflammatoire, expectorant, miaro ny aty sy ny aphrodisiac.
Io dia ahitra tena feno, etsy ambany dia asehonay anao ny tena toetra mampiavaka azy.
Ampio ny fanarenana ny hoditra.
Ahenao ny ratsy kolesterola.
Miady amin'ny aretin-kibo.
Mandrisika ny rafitra digestive.
Mampihena ny haavon'ny siramamy ao anaty amin'ny olona voan'ny diabeta karazana 2.
Manampy amin'ny famokarana insuline.
Mety amin'ny fihenan'ny lanja satria mihena ny fanangonana tavy amin'ny tavy.
Mampiroborobo ny fitomboan'ny volo.
Ario ny poizina ny zavamiaina ao amin'ny lymphatic nodes.
Manatsara ny hery fiarovan'ny vatana ny zavamananaina.
Manana habe be dia be izy io Mahasalama ka miaro antsika amin'ny soritr'aretin'ny sery mahazatra.
Manatsara ny asan'ny aty.
hahamaivana ny fahorian'ny fanaintainana alohan'ny fotoana mialoha ary ny soritr'aretin'ny fadim-bolana.
Manentana ny famokarana rononon-dreny.
Misoroka vato voa.
Iray amin'ireo hatsarana lehibe an'ny masomboly fenugreek Io no fananany galactogenic, izany hoe manampy amin'ny famokarana rononon-dreny, noho izany dia atolotra ny vehivavy rehetra mampinono.
Ankoatr'izay, ny masomboly fenugreek dia manana toetra anabolika, mety mahasoa izy ireo amin'ny fampitomboana ny tratra.
Ny voa Fenugreek dia azo hanina sautéed misy menaka kely ary ampiarahina amin'ny legioma na salady. Etsy ankilany, izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny pickles sy chutney Indiana, io dia iray amin'ireo singa ilaina amin'ny fanomanana ny lovia Vindaloo amin'ity faritra ity.
Somary mangidy, masiaka ary somary miavaka ny tsirony. Nampiasa azy ireo ny Egyptianina tamin'ny fanafody natoraly azy ireo. Any India izy ireo dia mampiasa ny ravina ho toy ny legioma iray hafa ary ny masomboly ho an'ny karazan-karizy rehetra.
Ny fananan'ny fenugreek Ao amin'ny voany no tena ahitana azy ireo, ny famerenana amin'ny laoniny tonga lafatra dia mety amin'ny marary sy ny olona malemy. Manome hery sy tanjaka izy ireo. Noho io antony io dia tsy asaina mandany azy ireo amin'ny alina satria mety hisorohana torimaso milamina.
Loharano proteinina lehibe, atleta maro no efa nanampy azy ireo tamin'ny sakafony mba hampitomboana ny hozatra ary tohano tsara ny latabatra fanazaran-tenanao.
Aiza no hividianana fenugreek
Miankina amin'ny fomba tianao handraisana an'io zavamaniry io dia azo jerena amin'ny orinasa samihafa. Raha te handany ny voan'izy ireo ianao dia afaka mandeha any amin'ny tsenan'ny sakafo indiana na aziatika, satria miaraka amina masomboly maro miaraka amin'ny masomboly izy ireo. Ho setrin'izany, rehefa ampiasain'ny atleta, izy ireo dia azo jerena ao amin'ny trano famenon-tsakafo.
En levitra amidy fenugreek fanampin-tsakafo. Ny anarany siantifika dia Trigonella Foenum-graecum.
Ny raviny dia laniana any amin'ny faritra Maroc, Moyen Orient ary India, noho izany, raha liana amin'ny fihinanana ny raviny any amin'ny tsena atsinanana isika dia hahita azy ireo.
Izy io dia vokatra azo antoka, miaraka amin'ny fananana sy tombontsoa lehibe, na izany aza, dia mety hiteraka vokany hafa.
Ny aretin-kibo. Izy io dia misy fibra be dia be, noho izany, dia mety hiteraka fivalanana, fivontosan'ny kibo na fivalanana. Raha mihinana fenugreek betsaka isika dia hisalebolebo na marary vavony.
Ho an'ny fananany dia azontsika atao jereo ny fiovan'ny fofona sy ny lokon'ny ranonao. Izany dia mitranga noho ny atin'ny valine, leucine ary isoleucine omen'ny masomboly fenugreek.
Raha fenugreek no ampiasaina mampitombo tratra sy tratra Izy io dia mety miteraka soritr'aretina amin'ny allergy: fitsinjarana, fivontosan'ny mucosa, maso feno rano na kohaka.
Manatavy anao ve ny fenugreek?
Ampiasaina amin'ny tanjona ara-pitsaboana izy io ary ny iray amin'izany dia ny fiakaran'ny lanjany. Raha tsy ampy lanja isika ary mitady hampitombo azy io, dia tsy tokony hiditra amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny fihinana vokatra be tavy sy gliosida izay hitondra vokany eo amintsika mandritra ny fotoana maharitra, tsy maintsy misafidy ny sakafo tsara indrindra manampy antsika isika ary ny iray amin'izy ireo dia voa. fenugreek.
Manampy amin'ny fitrandrahana angovo ary mampitombo ny fihinanana azyNoho izany, manampy amin'ny fandoroana kaloria bebe kokoa ao anatin'ny iray andro izy io. Ity toerana ity dia mety hahatonga antsika hieritreritra fa raha lanintsika izy ireo dia hihena isika, marina izany, na izany aza dia afaka manohitra an'io hatsaran-toetra io isika.
Mba hahazoana lanja dia tsy maintsy misotro ranon-javatra be dia be isika, indrindra ny rano miaraka amin'ny fenugreek, dia hampitombo ny filan'ny nofo. Fenugreek misy saponins, singa manan-danja sasany izay mahatonga ny vavony hiasa tsara ary miaraka amin'izay ho voaro.
Amin'ny fampitomboana ny fahazotoan-komana dia tsy maintsy ho hendry isika ary handany vokatra voajanahary, voajanahary, manankarena tavy mahasalama, gliosida ary proteinina legioma sy biby amin'ny ampahany mety. Manoro hevitra izahay ny misotro dite fenugreek, izay tena mora omanina, miaraka amin'izany ny fitomboan'ny fahazotoan-komana ary ny saponins avoaka dia hanampy anao handray tsara ireo otrikaina amin'ireo sakafo voafantina.
Fenugreek hampitomboana ny tratra
Ampitomboy ny haben'ny tratra Izy io angamba no iray amin'ireo fanintonana ankehitriny indrindra amin'ny vehivavy. Ny zavamaniry sasany misy atiny hormonina avo lenta dia afaka manome tosika kely anao hahatratra ny tanjonao. Fenugreek amin'ity tranga ity dia mety ho vahaolana tsara amin'izany faniriana izany.
Ny fampidirana Fenugreek dia voalaza fa manana hery lehibe manampy ny tratrany hitombo ary koa hamokatra rononon-dreny bebe kokoa.
Manomana a manondraka fenugreek mila ireto manaraka ireto ianao:
Rano telo kaopy
Voa iray sotro sotro fenugreek.
Voan'ny fennel iray sotro fihinana iray sotro.
Sotro fihinanana iray sotro.
Hafanainay ny rano mandra-panombony. Raha vantany vao tonga ny vay dia vonoinay ny hafanana ary ampio ireo fangaro, avelao mijoro mandritra ny folo minitra miaraka amin'ny sarom-bilany. Raha vantany vao lasa ny fotoana dia sakano ny fangaro ary arosoy.
Azontsika atao ny manao an'io tsindrona isan'andro mandritra ny tapa-bolana. Rehefa afaka tapa-bolana dia ho hitanao ny fiovana. Ilaina fotoana ireto fanasitranana ao an-trano ireto, tsy fandidiana hatsaran-tarehy izany, hanampy anao fotsiny ny mahita azy ireo ho matanjaka kokoa sy amin'ny habetsany kokoa.
La fikirizana sy fikirizana tsy maintsy eo izy ireo isan'andro mba hahomby ny valiny. Atambaro ity fampidirana ity amin'ny fanazaran-tena manokana ho an'ny faritra ary ampio sakafo mahasalama amin'ny sakafonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Inona no atao hoe fenugreek?
103 hevitra, avelao ny anao
Nandeha tany amin'ny omeopathie aho dia nomen-dry zareo fenugreek handany lanja miaraka amina flaxseed sy fangaro anti-kolesterola. Mihevitra ve ianao fa tena manampy ahy? Ankasitrahako ny valiny
sofy dia hoy izy:
inona no antsoina hoe fenugreek any Arzantina
Mamaly an'i sofy
jereo dia hoy izy:
Afaka manampy ahy ve ianao satria fantatra any Ekoatera ny fenugreek na omeo ahy ny mampiavaka azy, misaotra betsaka anao nanampy ahy tamin'ity fanontaniana ity.
Salama ny marina, mangetaheta hahita ny fenugreek aho, avy any Mexico aho ary amin'izay vakiako rehetra dia tsy fantatro raha marina izany, fa mety hitera-doza aho hanampy ahy.
laura hello, avy any Mexico aho, ary amidiko ... $ 100 pesos ny tavoahangy misy kapsula 90, manao fitaterana manokana aho ... madio 100% izy ireo ary kapsily mivantana an'ny masomboly ... Mifandraisa amiko emmpu89@hotmail.com
Ho an'i Laura avy any Mexico, tsy fantatro izay tanàna ipetrahanao, fa ao amin'ny GDL dia misy orinasa naturista maromaro mivarotra azy. Mihinana azy io ao amin'ny magazay iray any Av. Alcalde zoro Jesús García.
Manantena aho fa ho azonao izany.
Jereo ny antony fantatro fa ny fenugreek dia ny mitombo lanja satria manome anao Nutrients. Raisiko ho an'izany! Manantena aho fa tsy hihena intsony.
maru velez dia hoy izy:
Fankasitrahana adala an'i Veronica: ny vokatra naturopathic dia matetika manome anao otrikaina ,,,, ary tsy mampatavy anao izany, manome anao sakafo !!! MITADIAVO FAT AMIN'NY SABOTSIN'NY SADOMA, FAT AMIN'NY, METY HANANA, MASINA, KOSY ICE, INDRINDRA malefaka, CAKES ,,,,, sns sns ,,,, tsy ny otrikaina!
Mamaly an'i maru velez
Ryma dia hoy izy:
Maru! Tadidio fa raha manova hormonina dia mora be aminao ny matavy! Tsy hanao risoriso zavatra iray manelingelina ny hormonina aho, noho ny antony maro, satria mihetsika tsy tapaka amin'ny ankamaroan'ny zavatra rehetra amin'ny vatantsika izy ireo! Ho ahy dia liana tamin'ny fampidinana ny tahan'ny glucose aho, fa amin'izay novakiako dia tsy mandray risika intsony aho.
Mamaly an'i Ryma
dogwood ruth dia hoy izy:
Te-hahafantatra aho fa afaka manome ny zanako vavy 1 taona sy tapany hanala ny filàny satria tsy dia misakafo izy ary mahia manify. Misaotra anao manantena valiny tsy ho ela
Mamaly an'i ruth de cornejo
Te hahafantatra ny fomba ahafantarana ny fenugreek any Ekoatera aho, toerana ahazoana ny masomboly, zavamaniry ary ny fomba tokony hataoko hambolena sy hambolena ity vokatra ity
HELLO AZONAO AZO ATAO ATAO DOKA MBOLA MISY MOMBA NY FENOGRECO TOY toetrany ary RAHA ENMEXICO dia fantatra amin'ny anarana hafa. GRAX
Valiny amin'i ROSARIO
Mary salazar dia hoy izy:
Nahita lahatsoratra iray momba ny fampinonoana aho, izay nanolorako hevitra fa mihinana pilina fenugreek hampitomboana ny rononon-dreny. Te hahafantatra aho raha marina izany na tsia satria ilaiko izany ary aiza no ahazoako azy ao Quito-Ecuador misaotra.
Valiny tamin'i Mary Salazar
Ny saka dia dia hoy izy:
hey ity dia fampahalalana tena tsara
Valio ilay saka dia
Jade dia hoy izy:
Salama .. avy any Mexico aho. Fanontaniana iray nolazain'ny FENOGRECO tamiko fa hampitomboana ny tratra, marina ve izany ??? Te handray aho fa matahotra ny hahazo lanja
Mamaly an'i jade
Salama, avy any Mexico aho ary tiako ho fantatra hoe aiza no ahafahako mahazo fenugreek, izy ireo dia manoro hevitra azy ireo mba hanapotehana ny vatana, manantena aho fa hahazo vaovao, misaotra.
Salama!!! Te hahafantatra aho raha azo any Kolombia ny FENOGRECO. aiza na raha manana anarana hafa io?
Nubia dia hoy izy:
Iza no anaran'ny zavamaniry fenugreek, izay any Colombia avy any Cali Valle aho, maika ny hahafantarako ny fomba ahafantarana an'io zavamaniry io, eto amin'ny fireneko sy ny plant hops, misaotra anao tamin'ny fanampianao, Nubia.
Mamaly an'i nubia
Salama, tiako ho fantatra raha manome voa ny vokatra fenugreek ary tiako ho fantatra ny fomba hitomboany
Miguel Placencia dia hoy izy:
Salama daholo, homeopath aho ary ny fenugreek dia azo alaina eraky ny sotrokely alohan'ny sakafo tsirairay, dia manampy betsaka anao amin'ny fanapoizinana ny vatanao izany. TSY mampatavy anao izany, ary azonao atao ihany koa ny manisy sotrokely amin'ny rano kely ary miasa ho toy ny plastera ho an'ny fery hoditra, pimples, diabeta tongotra diabeta dia tsy matahotra fa tena mandaitra ary misaotra tena mendri-kaja
Mamaly an'i miguel plascencia
Cjhm18 dia hoy izy:
Salama tolakandro tsara, nahita fenugreek aho amin'ny lafarinina hampitomboana lanja sy tratra satria mahia loatra aho, saingy tsy haiko ny mandray azy io ary isaky ny fotoana vitsy isan'andro, dia tiako izany raha ampahafantarinao ahy ny momba azy, arahaba .
Valiny amin'ny Cjhm18
HATRANY IZAY MANAMPY MBA HAMPITARITRA NY MARINA FA MARINA, NY SISTERAKO NO NANDRITSIKA NY VOA AVY AMIN'NY USA, INDRINDRA TSY MBOLA HAHITA AZY IZANY NO hipetrahako (COLOMBIA) TAMIN'NY 2 volana no nitondrako azy ary nitombo 2 SIZES aho, hitako ny vokany. NY HERINANDRO FAHAROA, NY SASIKO MBOLA SADY ARY VOALOHANY, FALY TENA IZAHO, ARY MAMPIASA NY OILY ALMONDA MBA HITANDRINA ANAO, ZANAKY TAMIN'NY COLOMBIA TENA sarotra ny mahazo azy io, nitady azy io efa ho herintaona aho, raha mila izany. MANORATRA ANAO yayalinda88@hotmail.com MAHARITRA AZY FA TSY MENDRIKA. KISSES, BYE
miala tsiny fa nahazo lanja amin'ny vatana ianao na tratra fotsiny
ratsy kokoa noho ny fandraisanao azy tamin'ny dite na nividiananao ny emilla s sy ny sisiste te, nampitombo ny habeanao fa tsy lanja amin'ny vavony alejandra sid
Salama ry zalahy, avy any Goatemalà aho ary vao roa andro no nihinana fenugreek, ka henoko sy vakiako, matahotra aho fa hihombo ny lanja. Misy olona naka an'io afaka milaza amiko raha mety hitranga izany na tsia. .
Salama, mandray infusion seed fennel aho, fa tsy misy na inona na inona, hanandrana fenugreek aho ary ho hitako izay hitranga; satria heveriko fa miaraka amin'ny fennel dia mijanona tsy mitombo izy, toa mihena izany. Ankehitriny lehibe kokoa ny bra. Manantena aho fa afaka manampy betsaka ahy ny fenugreek; satria efa manaintaina aho.
brigithe dia hoy izy:
Salama daholo azoko fa ny fenugreek dia manampy anao hampitombo ny hozatrao, hanatsara ny metabolisma anao, hampitombo ny lanja ary hampitombo ny bust Manantena aho fa marina izany, noraisiko nandritra ny 2 andro izany ary manantena aho fa mendrika izany sorona izany satria mahatsiravina ny tsirony = Tsy misy very ny fanandramana toy izany, mifalia ny zazavavy
Mamaly an'i brigithe
Mandray masomboly fenugreek aho (tablespoons 2 natsonika tao anaty rano tamin'ny fiandohan'ny andro) mba hampihena ny lanjako, tiako ho fantatra raha marina izany sa mahatonga ahy ny mifanohitra amin'izany dia ny fihenan-danja. Azonao hazavaina ho ahy ve izany? . Misaotra anao
Salama namana, any Medellín aho, raha mila fenugreek ianao dia afaka mahazo azy ireo aho raha tianao, afaka mifandray amiko ianao adrivillada12@hotmail.com
Eny, te-handray aho fa mba hampitomboana ny tratrako dia tsy fantatro na ho raisiko satria milaza izy ireo fa mandrisika ny fahazotoan-komana ary te hihena aho, tsy mahazo izany, raha toa ka mahasoa ahy toa an'i Tijuana io. , Baja California, misaotra
Ohatrinona ny vidiko avy any Colombia Córdoba
ny hatsaran-toetra dia hoy izy:
Salama zazavavy. Roa andro no nanaisako fenugreek tao anaty maraina mba hampitomboana ny tratra. Talohan'ny nanomezako fennel nefa heveriko fa tsy mandeha izany dia efa ela no tsy marina io. Fa toa avy amin'ny zavatra novakiako dia manome ahy Matoky bebe kokoa ny fenugreek. Hampahafantatra anao ny fandrosoana aho raha misy izany. Manantena aho fa afaka manampy anao.
Mamaly ny hatsaram-panahy
QUITO-ECUADOR Salama hitako fa tena mahaliana ny fampahalalana, saingy tsy hitako ny vokatra any Quito-Ecuador, notadiaviko tany amin'ny GNC izany satria natolotra tamin'ny forum hafa, saingy tsy entin'izy ireo intsony satria tsy dia ara-barotra loatra. Raha misy olona afaka manampy ahy dia tena tiako izy io, dia takiko maika izany. Misaotra mialoha
Salama daholo, tsy maintsy milaza aminao aho fa heveriko fa mandeha io, heveriko fa lazaiko anao satria ny marina dia mitovy habe amiko saingy very 4 k aho satria nanao sakafo dia te hilaza izany fa tsy noho ny fenugreek fa satria tiako izany. Mbola manana ny habeny aho, fantaro fa milanja 51 k aho ary refy 1 60, manana tratra 85 90. Alohan'ny hamoizako lanja dia ho very ny tratrako avy hatrany. Tsy te hihena intsony aho, holazaiko anao ny ataoko.
Virtu dia hoy izy:
Hadinoko, ho anao izay tsy mahalala fenugreek dia antsoina koa hoe fenugreek, angataho izany koa amin'ny anaranao, raha tsy hitanao dia tsy mivarotra aho fa tsy mampaninona ahy ny mividy azy handefa an'izay tsy mahita izy (tsy mahazo karama) eto dia sarobidy any Espana eo amin'ny 1,50 euro. Fa raha manandrana tovovavy fennel dia hanandrana indray aho ary afangaro ireo zavatra roa ireo, heveriko fa nanandrana fotoana kely aho. Ankehitriny dia nampahery bebe kokoa aho . Hanohy hanao tatitra aho.
Valiny tamin'i Virtu
Ampio aho ny fomba nihena lanja anao tiako ho fantatra fa tsy fantatrao hoe te hihena be aho
Salama Yoli, toa hitako fa nisy zavatra nitovizany nitranga tamiko, mora tohina kely aho sy ny vazivazy ... saingy tsy haiko hoe hanome lanja azy io, nieritreritra ihany koa aho fa mety ho anao izany. no antony na raha sendra ny mifanohitra amin'izay dia kisendrasendra, ny tena marina dia tsy mifalifaly aho fa tsy maintsy hijereko azy.Fa ny vokany, omeko anao indray ny fijoroako ho vavolombelona afaka fotoana fohy.
Salama ho an'i Katty avy amin'ny ECUADOR, novakiako ihany koa tao amin'ny forum hafa momba ny fivarotana GNC, mampalahelo fa tsy entin'izy ireo intsony, avy any Guayaquil aho, fa ao amin'io forum io ihany dia nisy Dr Gallardo izay mampiasa fenugreek hitsaboana ny asma ary manome ny nomeraon-telefaoniny izay 072916636 dia avy any Ekoatera ihany koa izy
Carmen, misaotra betsaka anao aho amin'ny fampahalalana momba ny fenugreek any Ekoatera, efa hitako ny dokotera izay mivarotra azy eto Quito, fa manana kapsily sy vovoka izy, tsy haiko hoe iza no ho tsara kokoa ?? ? fa hanandrana aho, misaotra anao nanampy ahy ianao satria tsy misy mahalala azy eto amin'ny firenena.
Valiny amin'i KATTY
Ivonne sanchez dia hoy izy:
Salama Katty, azonao atao ve ny manampy ahy amin'ny telefaona na ny adiresin'ny dokotera hahalalako ny momba ny capsules. Misaotra
Valiny tamin'i Ivonne Sanchez
francisco: mpivarotra fenugreek frank.mrn@gmail.com Bogota Colombia
Izaho dia mpizara: vokatra tany am-boalohany fenugreek miaraka amin'ny fandefasana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao
kalitao tsara sy fandefasana eo noho eo.
Izaho dia mpizara: vokatra tany am-boalohany fenugreek
Ho an'i Janeth avy any Tijuana, BC…. Nividy izany tao amin'ny tsenan'i Hidalgo aho omaly ary tsy lafo mihintsy. Tsara vintana !!! … Ny zavatra tsy hitako dia voa Fennel ... raha fantatrao xfa lazao amiko… Misaotra !!! Adri.
Salama namana. Azafady, hitanao tamin'ny voa, ravina, vovoka sa ahoana? Milaza izy ireo fa tsara kokoa amin'ny ravina fa tsy hitako izy ireo na aiza na aiza: /.
Te hampitombo ny pechs aho fa toy ny tabilao aho ary marary ireo ankizilahy maneso ahy, ampio aho dia hoy izy:
Te hampitombo ny tratrako aho ary leo ny ankizy maneso ahy sy miantso ahy latabatra. ampio aho
Mamaly fa te hampitombo ny pechs aho dia toa tabilao ary marary ny ankizilahy maneso ahy, ampio aho
Fantatr'izy ireo izay ananan'ny saponins fenugreek, tiako hividy azy io koa any Puebla
Mamaly an'i nina
MONKY222 dia hoy izy:
HELLO NINA AVY AMIN'NY COLIMA MEXICO aho ary manana izany amin'ny herinaratra, TANDREMO IZAO ARY TAHIN'ANDRIAMANITRA
anna knight dia hoy izy:
Te hahafantatra amin'ny anarana hividianana azy any Colombia aho
Mamaly an'i ana caballero
yeneli dia hoy izy:
Salama, zazavavy 25 taona aho ary milanja kilao 42. Nolazain'izy ireo tamiko fa ny zavamaniry fenugreek dia tsara ahazoana lanja.
Mamaly an'i yeneli
LIS dia hoy izy:
HELLO Miaina ao amin'ny DF MEXICO aho, TE HANINA INDRINDRA ny voa na ny ravina PHENOGRECO, FA TSY HITADY AZO DF, MISY MAHALALA AZY IZANY IANAO NO MIVAROTRA AZY ETO MEXICO TANANA. ???
Valiny amin'i LIS
empu89 dia hoy izy:
Salama Liz, mivarotra kapsily fenugreek voajanahary 100% aho ary vita amin'ny voa izany. Avy any Mexico City aho, ary manatontosa ahy ny fanaterana manokana emmpu89@hotmail.com 🙂
Valio ny Emmpu89
Ry namako toy izany, azoko tao amin'ny fivarotana iray antsoina hoe anjelin'ny fahasalamana, amidin'izy ireo hanomanana dite sy vovoka izy io, eo amoron-dàlana, miaraka amin'ny famindram-po! Arahaba!
Salama, ahoana ny voninkazo?
Salama te-handray fenugreek hampitombo ny tratrako aho fa any Kolombia dia tsy fantany izany anarana izany any Kolombia fa manana anarana hafa MISAOTRA ANAO NY FANAMPIANAO
Salama mipetraka any Venezoelà aho ary liana amin'ny fenugreek amin'ny masaka, lazain'izy ireo amiko fa manome azy ireo tsiro mahatalanjona ho an'ny sakafo izany nefa eto tsy fantany izany noho io anarana io dia misy milaza amiko izay antsoin'izy ireo eto.
daphnia dia hoy izy:
Salama! mividy takelaka genogreco, ny tanjoko dia ny hitondra azy ireo hampitombo bust, fa manana ny ahiahy aho, satria voalaza koa fa mampitavy anao ny genogreco. misy manampy ahy !!!
Mamaly an'i dafnia
salama hello tovovavy !!! Te hahafantatra aho raha afaka mahazo fennel sy fenugreek ao an-tanànan'i Guatemala ary azonao atao ve ny manampy ahy, ary ny iray izay efa nampiasa azy io ary lazao amiko raha marina fa mampitombo ny tratranao izany ary mampihena ny lanjany… azafady misaotra betsaka… .
NY FAHAMARINANA TSY AZO ATAO IZAO DIA TADIKO IZANY ARY MBOLA NAHITA lanjany ary mieritreritra aho fa IZAO NO TOROHEVITRA HO AN'NY OLONA TE HAMPIASA VOLA TSY HO AN'IZAY TE HANDEFITRA ARY HANAMPY NY BUST FA AZONAO HITANAO AMIN'NY INTERNET IZANY NY ZAVATRA REHETRA FA MBOLA NITADIDiko AZY ARY TSY NAMPIASA INDRINDRA NY CONTRARY AZO NOHON'NY FITSIPIKA IZAO FA AZONAO ATAO ANDRANA ANDRAIKITRA ARAKA NY VOKANY HITANAO FA TSINO FA HITANAO FA NANOMPOANA NY KOMENAKO. VELOMA
yeryka dia hoy izy:
Salama Janet Te-hahazo lanja aho rehefa raisiko ary ato anaty anana na kapsily misaotra
Valio i yeryka
sucy dia hoy izy:
Salama, tiako ho fantatra ny fomba nandanianao azy sy ny fatra marina, tiako be izany
Mamaly an'i Sucy
Naylidine dia hoy izy:
Ahoana no nitondranao azy? Ary mandra-pahoviana? Ary firy kilao no azonao
Valiny tamin'i Naylidina
Angel montoya dia hoy izy:
Salama namana, tena mahomby tokoa ny fampiasana fenugreek hanasitranana ratra amin'ny diabeta, izany no nanasitranana azy tamin'ny fery tamin'ny tongony izay nananan'ny rafozako vavy, izay diabeta, ary ny tenako ihany no nampiasa azy io hanasitranana hemoroida nijaly aho, eto Loja, Ekoatera dia maniry voajanahary ao amin'ny faritra amoron-tsiraka, ampiasaina ho makeraty amin'ny fanadiovana izy ary apetaka amin'ny vony na fery. Azonao atao ny manoratra amin'ny mailako: angelmontoyap@gmail.com, arahaba
Valiny tamin'i Angel Montoya
Yomi87 dia hoy izy:
Avy any Guayaquil aho, maniry an'io zavamaniry io aho
Valiny amin'i Yomi87
Salama maraina, lazaiko aminao fa mpamatsy masaka hohanina aho, miaraka amin'ny vidiny ambongadiny sy antsinjarany, raha mahaliana anao izany dia anontanio ahy amin'ny alàlan'ny mailaka ary alefako aminao ny lisitry ny vidiko, tsy andoavana adidy, alefanay, amin'ny micro.
Salama, mipetraka any Colombia aho, Medellin, aiza no hahazoako azy? Valio aho azafady, misaotra
mahafaly dia hoy izy:
Salama. Manolotra ny vokatra ao anaty kapsily aho. Fanazavana fanampiny. mandefa fahalianana sy fisalasalana.
Valiny tamin'i Saludya
natyk7daza dia hoy izy:
Salama, avy any Kolombia aho, liana mividy ny kapsily ho anao aho
Valiny ho an'i Natyk7daza
maria farina dia hoy izy:
Salama, avy any Paraguay aho. Te hahafantatra aho hoe rahoviana no misy ny vokatra ary raha afaka mandefa izany amiko eto ianao.
Mamaly an'i maria fariña
Alvaro Emilio Cano dia hoy izy:
Salama mipetraka any Medellin aho noho ny fahagagana ary tiako ho fantatra raha azonao atao ny milaza amiko hoe ohatrinona ny vidin'ny fenugreek.
Mamaly an'i alvaro emilio cano
Vivi24_552 dia hoy izy:
Salama, tiako ho fantatra raha misy vokany ratsy io ary raha mendrika izany ho an'ny hicos
Valiny amin'ny Vivi24_552
Sergio Garfias dia hoy izy:
Marina ve fa ny fenugreek dia ampiasaina mba hisorohana ny fihenan'ny volo na ho lasa pika na nalaina?
Valiny tamin'i Sergio Garfias
sweetnataly99 dia hoy izy:
Salama, mivarotra masomboly fenugreek sy fennel aho. Misy email amin'ny fanontaniana rehetra sweetnataly99@hotmail.com na finday 3188063687
Mamaly an'i Sweetnataly99
laflaca_22 dia hoy izy:
Salama, avy any Gral Roca aho ary tsy azoko ny ravina fenugreek hanaovana infusines. Fantatrao ve raha azoko alefa izy ireo hanafatra any amin'izay?
Valio i Laflaca_22
Izaho indray dia te hampitombo ny tratrako mba tsy hampiakatra lanjany amin'ny ankapobeny !!
Manolotra kapsily fenugreek aho. Vokatra voajanahary amin'ny laboratoara tena tsara. Ahitana ny vidin'ny fandefasana na aiza na aiza ao Colombia ny vidiny. Inf lehibe healthya@hotmail.com
Hanana izany isika dia hoy izy:
Jereo ny raiben'ny vadiko voan'ny homamiadana tao amin'ny sofina iray ary toa lo ny sofiny ka nanomboka nihinana dite fenugreek izy ary niaraka tamin'ny rano avy amin'ny dite nanasa ny sofiny izy ireo ary fahagagana iray fa tsy mbola nisy izany ratra izany dia nanjavona avy eo. , Izaho dia manana fijoroana ho vavolombelona iray hafa momba ny vadin'ity lehilahy ity izay tao amin'ny hopitaly tany Los Angeles satria voan'ny homamiadan'ny vavony izy ary nilazana izy ireo fa hitondra azy satria efa nanana telo herinandro velona izy dia nanomboka nihinana dite fenugreek ary ity dia efa-taona ary matanjaka be ilay Ramatoa Andriamanitra.
Valiny tamin'i Tencharamos
Salama, Fantatrao ve fa misy fanasitranana miorina amin'ny PHENOGRECO, CHARCOAL VEGETABLE, VITAMINAE ary CRAB hanala ny CANCER BREAST ao anaty kaomina 75% dia halefako aminao ny RESIPA. TAHIN'ANDRIAMANITRA ANAO REHETRA.
ry namako, avy any Mexico City aho, mivarotra fenugreek tsy misy afa-tsy 100% amin'ny masomboly fa amin'ny kapsily 500mg ... misy kapsily 90 ilay tavoahangy ... 150 $ ny tavoahangy na tavoahangy 3 amin'ny $ 400 pesos ... ataoko ny fandefasana anao manokana sy ny fandefasana amin'ny alàlan'ny mpandefa iraka..ny safidinao dia azo antoka 100 %..hontakoha aho emmpu89@hotmail.com.. andro tsara
Zulay dia hoy izy:
Salama, avy any Venezoelà aho ary tiako ho fantatra hoe iza no anarana omena ilay zavamaniry fenugreek eto ary aiza no amarotany azy, mba andefaso ny valiny, misaotra
Valiny tamin'i Zulay
Sofia rodriguez dia hoy izy:
Te hampitombo ny tratrako aho fa tena saro-kenatra aho ny fanontaniako hoe afaka mihinana pilina ve aho ary mihinana fenugreek amin'ny fotoana iray?
Valiny tamin'i Sofia Rodriguez
Ahoana no fahazoako azy any Chili?
Tiako ho fantatra hoe aiza no amarotany fenugreek ao Cali, tiako ny manandrana azy ..
Innocence Bordon dia hoy izy:
Salama, avy any Paraguay aho, tiako ho fantatra koa hoe aiza no azoko ividianana azy
Valiny tamin'i Inocencia Bordon
ZAIDA CECILIA dia hoy izy:
Salama. Manan-danja ve ny taona noho ny fahombiazan'ny fenugreek amin'ny fampitomboana ny nono?… Misaotra
Valiny amin'i ZAIDA CECILIA
HELLO KAREN, any Costa Rica koa aho, tiako ho fantatra raha mahita fenugreek ianao? Ary raha nataonao aiza no ahitako azy. Misaotra betsaka amin'ny fanampianao.
Tsara any amin'ny toerana ahazoako fenugreek any Venezoela
Gina dia hoy izy:
Salama, nataoko izany, lazao amiko izay anarana tiako ihany koa
Mamaly an'i Gina
Maria Alejandra dia hoy izy:
Te handray izany aho fa tsy te hihena satria tsara lanja aho dia ny hitondra ny volo fotsiny no tadiaviko ary inona no lazain'izy ireo fa mampitombo ny tratra sy ny tratra dia milaza amiko izay azoko atao izy ireo manao ?????
Mamaly an'i maria alejandra
Hols, manao ahoana ianao, tiako ho fantatra hoe ahoana ny fahafantarana ny fenugreek any Ekoatora hahafahany mandany azy, azafady mba ampio aho amin'izany, misaotra
Valiny tamin'i Stefania
Mirabellka dia hoy izy:
N74 Najistotniejsza w odchudzaniu jest motywacja dziewczyny, ja codziennie ogladam metamorfozy przed i po odchudzaniu i daje mi to kopa do cwiczen, kto chce tez troche motywacji niech sobie wpisze w google: odchudzanie setka
Mamaly an'i Mirabellka
Tatiana Castellanos dia hoy izy:
Salama any bucaramanga Santander Colombia ahafahanao mahazo fenugreek ... raha mampatavy anao na mampihena ny lanjanao ny fenugreek dia te-hampitombo ny tratrako aho satria 32 taona ny habako fa tsy te-hahazo lanja
Valiny tamin'i Tatiana castellanos
Mivarotra fenugreek ianao, te-hahazo lanja aho
Salama, azo raisina ho an'ny kista sy fibroid koa izy io.
Salama, avy any Venezoelà aho ary tiako hilazanao amiko izay iantsoana na iantsoana an'i Fenugreek eto amin'ny fireneko, nitady ny anarana iraisana amin'ny Internet aho saingy tsy nisy anarana fantatra, nitsidika fivarotana sakafo ara-pahasalamana aho ary manao izany izy ireo tsy haiko ny milaza amiko hoe inona izany noho ny Ampianaro aho azafady satria tena liana amin'ny fividianana ireo masomboly ireo aho. MISAOTRA
Juan Jose Rivera dia hoy izy:
Azonao atao ve ny miteny amiko raha mivarotra masomboly fenugreek eto Monterrey ianao ary aiza izany ary raha manana ny adiresy sy ny nomeraon-telefaona ianao dia afaka mandefa izany amiko ary misaotra betsaka mialoha
Mamaly an'i juan jose rivera
liz rodriguez dia hoy izy:
Salama, misy afaka milaza amiko izay antsoiny hoe fenugreek any Nikaragoa?
Mamaly an'i lizz rodriguez
Kenya dia hoy izy:
Salama, azonao atao ve ny milaza amiko hoe aiza no hitoezana an'io voa io eto Etazonia, azafady, liana aho
Valiny amin'i Kenya
Angelica Paola dia hoy izy:
Salama, izaho Angelica avy any Bogota, Colombia dia maniry ny vokatra, ny nomeraon-telefaonako dia 3115924827, manorata ahy amin'ny whatsaap, misaotra anao.
Valiny tamin'i Angelica paola
Salama, avy any Ekoatera aho, toerana ahafahako mahazo fenugreek ary iza no anarana ahafantarana azy eto Ekoatora, hahomby amin'ny fanamafisana ny tratrany mihena io. 48 taona aho, te handratra izany.
Mamaly an'i JODIT
Salama ry zazavavy, avy any Venezoelà aho ary mila mihinana fenugreek, nitady an'io ary tsy misy azoko atao. raha misy afaka miteny ahy. Tena tiako izany, misaotra betsaka.
Mamaly an'i pili
Any Venezoelà, iza ny anaran'ilay voa fenugreek?